Vaovao - Momba ny Carbide simenitra （I）
1. Ny singa fototra amin'ny karbida simenitra
Ny carbide simenitra dia vita amin'ny vovoka carbide metaly refractory (WC, TiC) micron ho singa fototra, miaraka amin'ny kobalta (Co), nikela (Ni), ary molybdène (Mo) ho fatorana. Azo ampiasaina amin'ny lafaoro banga na vokatra metallurgy vovoka hydrogène voasivana ao anaty lafaoro fampihenana.
2. The Compose ny substrates ny simenitra carbide
Ny substrate amin'ny carbide simenitra dia misy ampahany roa: ny ampahany iray dia ny dingana fanamafisana, ary ny ampahany hafa dia ny metaly mifamatotra.
Ny dingana mafy dia ny carbide ny tetezamita metaly ao amin'ny tabilao periodika, toy ny tungstène carbide, titane carbide, ary tantalum carbide. Ny hamafin'izy ireo dia avo dia avo, ary mihoatra ny 2000 ° C ny haavony, ary mihoatra ny 4000 ° C ny sasany. Ankoatr'izay, ny nitrides metaly, borides ary silicides dia manana toetra mitovy ary afaka miasa toy ny dingana manamafy amin'ny karbida simenitra. Ny fisian'ny dingan'ny fanamafisana dia mamaritra fa ny firaka dia manana hamafin'ny avo dia avo sy fanoherana.
Ny metaly mifamatotra dia metaly vondrona vy, ary kobalta sy nikela no ampiasaina matetika.
3. Ahoana ny fiasan'ny singa tsirairay amin'ny famokarana
Rehefa manamboatra carbide simenitra dia eo anelanelan'ny 1 sy 2 microns ny haben'ny poti amin'ny vovoka akora voafantina amin'ny orinasa carbide simenitra, ary avo dia avo ny fahadiovana. Ny akora fototra dia afangaro araka ny fepetra voatondro, ary ny alikaola na ny fitaovana hafa dia ampiana amin'ny fitotoana mando ao anaty fitotoana baolina mando mba hahatonga azy ireo hifangaro tanteraka sy hotorotoroina. Aorian'ny fanamainana sy fanivanana dia asiana fitaovana famolahana toy ny savoka na lakaoly. Ny fangaro dia azo amin'ny sieving. Avy eo, rehefa ny fangaro dia granulated sy nanery, ary nafanaina mba hanakaiky ny toerana levona ny metaly binder (1300-1500 ° C), ny mafy dingana sy ny binder metaly dia hamorona eutectic firaka. Aorian'ny fampangatsiahana, ny dingana mafy dia zaraina ao amin'ny grid ahitana ny metaly mifamatotra, ary mifandray akaiky amin'ny tsirairay mba hamorona iray manontolo. Ny hamafin'ny carbide simenitra dia miankina amin'ny votoatin'ny dingana mafy sy ny haben'ny voa, izany hoe, ny avo kokoa ny votoatin'ny dingana mafy sy ny tsara kokoa ny voa, ny lehibe kokoa ny hamafin'ny. Ny hamafin'ny carbide simenitra dia voafaritra amin'ny metaly mifamatotra. Ny avo kokoa ny votoatin'ny metaly fatorana no lehibe kokoa ny hery miondrika.
Fotoana fandefasana: Mar-15-2021
Milling Cutter, Solid Carbide End Mills, Carbide simenitra, Carbide Precision Tools, Carbide Tools, Fitaovana karbida,